Izindaba - Ukulangazelela nobuningi be-Foam Metal
Ngo-2015, izinto zokwakha amagwebu eziyinhlanganisela zensimbi zakhiwa ngokuhlanganyela ngabaphenyi abavela eDST naseNew York University Institute of Technology.
Inobuningi be-0.92 g / m3 kuphela futhi iyakwazi ukuntanta emanzini. Ngokumangazayo, le nto inamandla anelisayo ngenkathi ithola isisindo esincane, futhi igobolondo layo elilodwa eliyindilinga lingamelana nengcindezi yamakhilogremu angama-25,000 nge-intshi ngayinye ngaphambi kokuphuka. Uma kuqhathaniswa ne-foam yensimbi yendabuko, inzuzo ye-foam eyakhiwe ngensimbi ukuthi ukuminyana kungenziwa ngokwezifiso ebangeni elithile, futhi ubukhulu nokuma kwezimbobo nakho kungalawulwa.
Ukulangazelela ukubhekisa kwisilinganiso sevolumu yawo wonke ama-pores emzimbeni ongena emzimbeni kufinyelela kuvolumu yomzimba ophelele, kuyisilinganiso esilinganiselwe sesikhala esingenalutho somzimba onezinhlaka. I-porosity yensimbi ye-foam imvamisa ifinyelela ngaphezu kuka-90%, futhi iyinsimbi enamandla futhi inamandla athile nokuqina. Lolu hlobo lwensimbi lune-porosity ephezulu, futhi ubukhulu bepore bungafinyelela ezingeni lamamilimitha.
Ubuningi begwebu lensimbi benza izinto zensimbi zensimbi zinezicelo ezikhethekile. Isibonelo, Izinto zokwakha amagwebu zensimbi ezisetshenziswa emkhakheni wokukhiqiza izimoto, zinganciphisa isisindo semoto, zithuthukise ukusebenza kahle kukaphethiloli, futhi zikhulise ukuvikelwa kwabagibeli uma kwenzeka ingozi ngosizo lwamandla wokumunca amandla.
Ekukhiqizweni kwangempela, kutholakale ukuthi izingxenye eziningi zezimoto zingenziwa nge-aluminium ene-foam. Njengesembozo esiphezulu, ikhava engezansi, izihlalo, amabhampa, izingodo zangemuva nangemuva zangemuva, njll. Isibonelo, iphaneli ophahleni elenziwe nge-sandwich foam aluminium evela eKaman Automobile Company yaseJalimane inokuqina okuphindwe cishe kasikhombisa kunalokho kwensimbi, kodwa isisindo sayo cishe silula ngama-25% kunezakhi zensimbi.
Isethenjwa: Umlando wokuthuthukiswa kogwebu lwensimbi
Ngo-1948, uSosnik waphakamisa ukulungiswa kwensimbi ene-foam aluminium ene-mercury enomphunga, okwakungokokuqala ukuthi abantu babe nomqondo wegwebu lensimbi. Okwamanje, kwephule inkolelo yendabuko yesikhathi eside yokuthi izinsimbi zinesakhiwo esinyene kuphela.
Ngo-1951, u-Elliott wakhiqiza ngempumelelo i-aluminium ene-foam ngokuncibilikisa indlela ekhihliza amagwebu.
Ngo-1983, iphepha elashicilelwa yi-GJDVIES labonisa ukuqala okusemthethweni kocwaningo ngohlelo lwensimbi, futhi ukucwaninga nge-foam yensimbi kwaqala ngesikhathi esisebenzayo.
Ngo-1988, i-orous Porous Solids-structure & Properties - eyashicilelwa ngu-LJ Gbson & MF Ashby isewumsebenzi obalulekile emkhakheni wezocwaningo lwezinto eziyizigaxa.
Ngo-1991, iKyushu Industrial Research Institute yaseJapan isungule inqubo yezimboni yokukhiqizwa kwezimboni kwe-aluminium ene foamed.
Ngo-2000, u-Ashby nethimba lakhe baqale ngokufingqa indlela yokulungiselela, ukusebenza nokuqondiswa kwesicelo sogwebu lwensimbi.
Kusukela ngo-2000, ubuchwepheshe bokulungiselela izinhlayiya ezinhle buye bukhula kancane kancane, futhi umkhakha wokucwaninga we-foam wensimbi nawo usuqale ukukhula ngokushesha.
Isikhathi Iposi: Jun-16-2021